हस्पिटल - दीपक समीप | Nepali Sahitya Ghar – नेपाली साहित्य घर
Home सिर्जना कथा / लघुकथा लघुकथा हस्पिटल – दीपक समीप
हस्पिटल – दीपक समीप
on: असार ११ , २०७८ शुक्रबार- ०९:४३
समाजसेवी अमरराज एक दिन बिरामी परे ।
उपचार छिटोछरितो होला। चाँडै नै निको भइएला भनेर उनी बिस्तारै बिस्तारै हिँडेरै नजिकको प्राइभेट हस्पिटल पुगे । चेकजाँच भयो । उनलाई भर्णा गरेर बस्नुपर्छ भनियो । उनको रगत, दिशा, पिसाब, खकार सबै जाँच गरियो । एक्स रे, अल्ट्रासाउड, सि टि स्क्यान पनि गरियो । फेरि एम आर आइ गर्नुपर्छ भनियो र गरियो । यति गर्दा अमरराज धपेडी र तनाबले झन गले । त्यसपछि उनलाई आइ सि यु मा राख्नुपर्छ भनियो र आइ सि यु मा राखियो ।
आइ सि यु मा बस्दा उनलाई अब पैसा कति लाग्ने हो ! अब पैसाको जोहो कसरी गर्ने हो ! आफूसँग ल्याएको र घरमा भएको पैसा यति गर्दैमा सकियो भन्ने लाग्यो । उनलाई आफू बिरामी भएको भन्दा पनि अब लाग्ने खर्चको चिन्ताले तनाब हुन थाल्यो ।
आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि झनझन उनि शिथिल हुँदै गए । त्यसपछि उनलाई भ्यान्टिलेटरमा राखियो । उपचारको खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो । परिवारले यताउता सर सापट गर्‍यो । त्यतिले पनि नपुगेपछि खेत बेच्यो । उनको उपचार चलिरह्यो ।
बिरामीको स्वास्थ्य स्थिती बुझ्दा डक्टरले हुन्छ हुन्छ मात्र भन्थे । त्यसको केही दिनपछि डक्टरले यहाँ भएन अर्को हस्पिटल लैजानुस् भनेर रिफर गरिदियो । सास भइन्जेल आस भन्छ्न् । निको हुने आशामा परिवारले डाक्टरले रिफर गरेकै हस्पिटलमा लगे ।
अर्को हस्पिटलमा पुर्‍याएपछि डाक्टरले परिवारलाई सम्झाएजस्तो गरी झपारे । पहिल्यै यहाँ ल्याउनु पर्दैन ? केही सीप नलागेपछि अन्तिम अवस्थामा ल्याउने ? परिवारको अनुहार मलिन भयो । त्यहाँ पनि सबै ल्याब टेष्टहरु दोहरियो । खर्च कम होला कि भन्ने आसले अनुरोध गर्दा पनि पहिलेको हस्पिटलमा गरिएको रिपोर्टहरु हेर्न मानेनन् । सबै ल्याब टेष्टहरु गरियो । यति गर्दा थाहा भयो कि नयाँ हस्पिटल झन पुरानोभन्दा महङ्गो रहेछ ।
बिरामीलाई पुन: भ्यान्टिलेटरमै राखियो । खर्चको मिटर झन्झन् बढ्दै गयो । परिवारले ज्यान रहे सम्पती कमाइन्छ भनेर घर बेचे । पैसाको खोलो बगाए पनि बिरामीको स्वास्थ्य बिसको उन्नाइस भएन । झन दिन प्रतिदिन अवस्था खस्किदै गयो ।
भएको पैसा पनि सकियो । अब भने खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य भएन । परिवारले आफ्नो आर्थिक अवस्था हस्पिटललाई जानकारी गरायो । तत्पश्चात हस्पिटलले घर लैजान सुझाव दियो । बाध्यताबस परिवारले अमरराजलाई हस्पिटलबाट लैजाने निर्णय गरे । अमरराजलाई लिएर हस्पिटलको गेटबाट के निस्किएका थिए, अमरराजले सास छोडे ।
अहिले अमरराजको लास र घरबार विहिन परिवार दुवै सडकमा आइपुगेका छन् ।
गजल – विमला विकिरण
एकल रचना वाचन एवं कविता विमर्श सम्पन्न